Aza Antsoina Hoe “Xi, ilay Pao (Mofo)” — Nogadraina Ireo Mpiserasera Shinoa Noho Ny Vazivazy Tamin’ny Karajia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2018 6:52 GMT
Pao nahandroana tamin'ny etona. Sary avy amin'i Michael Stern tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0)
Ao Shina, tsy miafina fa haraha-maso na indraindray voasivana ny resaka an-karajia ao amin'ny sehatra media sosialy toy ny WeChat na QQ. Saingy tsy dia fantatra loatra ny voka-dratsin'ny fandefasana votoaty na hevitra an-tserasera “saro-pady”. Na dia ho an'ireo mpiserasera aterineto matihanina aza, sarotra ny mino fa indraindray mety hitarika any am-ponja ny lahatsoratra tahaka izany.
Tamin'ny taona 2017, mpisera aterineto telo farafahakeliny no nosamborina sy nogadraina noho ny fanaovana vazivazy ara-politika tao amin'ny karajia.
‘Xi, ilay Pao’
Voasazy 22 volana an-tranomaizina i Wang Jiang Feng, mpiserasera avy ao Shangdong tamin'ny volana aprily 2017 rehefa voaheloka ho “nanangona fifandirana sy niteraka korontana” raha nanondro am-pamazivaziana ny Filoha Shinoa Xi Jinping hoe Xi Baozi na ““Xi, ilay Pao Nahandroana tamin'ny Etona” ary avy eo niantso azy hoe “jiolahimboto maoista”. Ny sazy lehibe indrindra amin'ity heloka ity dia dimy taona an-tranomaizina.
“Baozi” na “Pao Nahandroana tamin'ny Etona” no anaram-bosotr'i Xi Jinping tao amin'ny aterineto nanomboka tamin'ny fitsidihany tampoka tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ao Beijing tamin'ny Desambra 2013, izay nikomandiany pao, ary niteraka fitantarana lehibe tamin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana izay nahatsapan'ireo mpiserasera aterineto maro fa nohitarina ny dikan'ny pao amin'ny nahandro Shinoa. Ny anaram-bositra hoe Baozi dia manana heviny ratsy ihany koa satria ny teny hoe “Tubaozi” dia midika hoe “firenena tambanivohitra” amin'ny teny Shinoa.
Raha nananihany ny filohan'i Shina hoe “Xi, ilay pao” i Wang Jiang Feng, dia voasazy higadra 22 volana an-tranomaizina. Sary natambatra tamin'ny sary tao amin'ny Radio Free Asia tamin'ny alàlan'ny Apple Daily News.
Tamin'ny volana Septambra, nampiakatra ny raharaha tany amin'ny fitsarana ambony i Wang ary nampihena ny saziny ho roa volana ny fitsarana. Nilaza ny fitsarana fa amin'ny faniratsirana ny mpitarika ny firenena, afaka nanome hevitra ratsy momba ny Antoko Komonista Shinoa, ny Rafitra Sosialista sy ny Didy jadona Demaokratikan'ny vahoaka i Wang, ka mety mampisafotofoto ny olona sy hampisy korontana ara-tsosialy, ankoatra ny voka-dratsy hafa izay mety “hanimba tanteraka ny filaminam-bahoaka” ny votoatiny.
Taorian'ny namoahana ny saziny voalohany tamin'ny volana Aprily, namoaka ny fanambarana fiarovany tamin'ny aterineto ny mpisolovava mpiaro an'i Wang, Zhu Shengwu, ka niteraka adihevitra goavana tao amin'ny fiarahamonin'ny lalàna ao an-toerana. Andro vitsivitsy monja talohan'ny fampakarana ny raharaha tany amin'ny fitsarana ambony tamin'ny 21 septambra, nanafoana ny fahazoan-dàlan'i Zhu hampiasa ny lalàna ny Departemantan'ny Fitsarana ao Shangdong.
“Andeha hiaraka amiko hanatevin-daharana ny ISIS”
Lehilahy Shinoa iray 31 taona no voasazy higadra sivy volana noho ny fanaovana vazivazy momba ny ISIS tamin'ny Septambra.
Nitranga tamin'ny septambra 2016 ny raharaha. Nanova ny sariny tamin'ny sarin'ny mpitarika ny al-Qaeda efa maty, Osama bin Laden ny lehilahy iray ary novazivazian'ny namany hoe “Jereo, misy tifitra goavana vao tonga” tamin'ny karajia miaraka amin'ny olona 300. Namaly ilay lehilahy avy eo hoe: “Andao hiaraka amiko hiaraka amin'ny ISIS.” Nolazainy tamim-pazivaziana izany, ary avy eo niova lohahevitra hafa ny resadresaka.
Nosamborina tamin'ny Oktobra 2016 ilay lehilahy ary voampanga ho nampiely fampielezan-kevitra mpampihorohoro sy mahery fihetsika, saingy tsy nanana porofo hafa hanohanana ny fiampangana ny polisy Shinoa. Herintaona taty aoriana, voaheloka higadra sivy volana izy.
Ny lohahevitra rehetra mahakasika ny Miozolomana na ny Silamo any Shina dia heverina ho saro-pady. Tamin'ny volana Aogositra 2017, voaheloka higadra roa taona an-tranomaizina ny olona iray 49 taona manana finoana Silamo noho ny fampianarana ny ampahany ao amin'ny Koran tamin'ny vondrona WeChat telo, izay ahitana mpikambana eo amin'ny 100 isaky ny vondrona. Tsy navoaka ho fanta-bahoaka ny antsipirian'ity raharaha miavaka ity. Ilay vazivazy ISIS kosa anefa noresahana be tao amin'ny media sosialy ary mpiserasera maro no nahatsapa fa henjana loatra ilay sazy.
“Ha ha, tantara ratsy momba ny kolikoly”
Ny tranga fahatelo kosa dia mikasika ny fiampangàna an'i Meng Jianzhu, manampahefana ambony ao amin'ny antoko Komonista, ho nandray anjara tamin'ny hetsika kolikoly, ary nanitsa-bady niaraka tamin'ilay mpihira malaza Wang Fong. Nataon'ilay miliaridera an-tsesintany Guo Wengui tao amin'ny Twitter ireo fiampangàna ireo .
Taorian'ireo fanendrikendrehana ireo, izay niely be tamin'ny aterineto, namoaka valinteny manesoeso mikasika ny vaovao ilay lehilahy Shinoa 41 taona, Chen Shouli, :
Ha ha! Tsy momba an'i Wang Fong sy Meng izany, sa tsy izany? Raha izany no nitranga, lasa ampirafesim-bady i Zhou Xiaoping.
Efa nilaza ihany koa i Guo, izay niteraka adihevitra be tamin'ny fiampangany an'ireo mpitarika antoko maromaro fa nandamina ny fanambadian'i Wang tamin'i Zhou Xiaoping, bilaogera tia tanindrazana noderain'ny Filoha Shinoa Xi Jinping noho ny ezaka nataony tamin'ny fanapariahana hery tsara antserasera i Meng.
Milaza ny polisy Shinoa fa “miteraka korontana” ny vazivazin'i Chen.
Mampiseho ireo tranga telo ireo fa ny resadresaka amin'ny karajia ao Shina dia eo ambany ny fanarahamaso ary azo ampiasaina ho porofo amin'ny fanenjehana heloka bevava ireo karajia voarakitra. Ny tena ratsy indrindra dia manjavozavo loatra ny famaritana ara-dalàna ny “manangona disadisa sy miteraka korontana” ka mandrisika ny polisy mba hisambotra olom-pirenena, na dia mamazivazy miharihary aza ny votoaty voalaza.